24th Birthday | The World of Pinkgold
ကိုထိုက် on January 18, 2008 at 12:45 pm said:
giant_kicker on January 18, 2008 at 2:48 pm said:
လန်းဆန်းကြည်လင်တဲ့ နှစ်သစ်နှင့်အတူကျရောက်လာတဲ့ လော်ရာရဲ့ မွေးနေ့ ကစပြီး .. ဘ၀ကိစ္စအ၀၀တို့ ၌
ဘေးရန်ခပ်သိမ်းကင်းပါစေ၊ ကြောင်းကြ ခပ်သိမ်းကင်းပါစေ၊ ပျော်ရွှင်သာယာတဲ့ အချိန်ကာလတို့ ကို ဖြတ်သန်း
ကုန်လွန်ပြီးသကာလ ငြိမ်သက်အေးချမ်းသော ဘ၀အဆုံးရှိပါစေလို့တောင်းဆုမွန်ပြုပါတယ်။
barnyar on January 19, 2008 at 1:51 am said:
ညနေကျရင် ကြံစည်ထားတာ အောင်မြင်ပါစေ..
phoe thu taw on January 19, 2008 at 2:50 am said:
ပျော်ရွှင်ပါစေလို့ ဆန္ဒပြုလိုက်ပါတယ်…စိတ်သွားတိုင်း ကိုယ်ပါနိုင်ပါစေ မပင့်ဂိုး..
linoo2007 on January 19, 2008 at 2:54 am said:
မွေးနေ့မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေ..မွေးနေ့လွန်သွားတဲ့ နောက်ရက်တွေမှာလည်း ပျော်ရွှင်ပါစေ ……
silvermoon on January 19, 2008 at 3:02 am said:
မွေးနေ့မင်္ဂလာပါနော် ထက်ရေ..မွေးနေ့မှာစပြီးနောင်နှစ်ပေါင်းများစွာ တိုင်ပျော်ရွင်မှုတွေ ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ…အရာရာလဲ အဆင်ပြေပါစေနော် ဘလော့ကနေ ကျွေးတာတော့ မ၀ဘူးကွာ.. အပြင်မှာလဲကျွေးကွာ…မွေးနေ့လက်ဆောင်ပေးမယ် မျက်လုံးမှိတ်ထား အာဝါးးးးးးးးး ♥♥♥♥
ညလေး on January 19, 2008 at 3:13 am said:
ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာ မွေးနေ့မွေးရက်လေး ဖြစ်ပါစေနော်… ဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒတိုင်းကို လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ပါစေနော်….
မယ်ပိုးလ်ဂင့်က “အီးဖု” တွေကျွေးတယ်တဲ့
ကိတ်မုန့်လဲ ဟုတ်ဘူး စားဘူးဟေ့….
ညနေ ဘာတွေ ကြံစည်ထားလဲဟင်… နာလဲပါမယ် :$
Yan on January 19, 2008 at 3:58 am said:
မုန့်တွေ အ၀စားသွားတယ်ဗျာ. ကျေးဇူး. လိုက်ပွဲလေးချပါဦး. 🙂 ပင့်ဂိုးလ်တစ်ယောက် ကျန်းမာချမ်းသာလို့ လန်းဖြာကာ ၀မ်းသာနိုင်ပါစေဗျားးးး (အဲဒါ သီးလေးသီးမဟုတ်ဘူးနော်. ငါးသီး. ရန်သီးတဲ့ဗျ) ဟတ်ဟတ်
Pinkgold on January 19, 2008 at 4:20 am said:
ဆုတောင်းပေးကြတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် ညနေကျရင် လူမိုက်တို့ရဲ့ သွားရာလမ်းမှာ မုန့်ကျွေးမှာမို့ လာနိုင်ရင် လာခဲ့ကြနော် ပုန်းနေမယ် ဟိဟိ
ကိုးသေး on January 19, 2008 at 4:46 am said:
မွေးနေ့ လေးမှာ ချစ်ခင်ရသူအပေါင်းနဲ့ပျော်ရွှင်ပါစေ အမ ပင့်ကူး ရေ…
လက်ဆောင်လေး..လောင်စွပ်သယ်လာ တာစီစစ်ရေးက ဆပလိုင်းချက်ဝင်တာနဲ့ .. ထားခဲ့ရတယ်..
ဒီလင့်လေးက ပဲကြည့်ပြီး ယူလိုက်ပါတော့နော့…။
ပြည့်စုံ on January 19, 2008 at 4:47 am said:
မွေးနေ့မှသည် နောင်နှစ်ပေါင်း(၁၂၀)ကျော်တိုင်အောင် ပင့်ဂိုးစိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ချမ်းသာနဲ့… ဘ၀ရီးကို ဘ၀လက်တွဲဖော် ချစ်တဲ့သူနဲ့အတူ ပျော်ရွှင်စွာလျှောက်လှမ်းနိုင်ပါစေလို့ ….
အေးချမ်းသွားတဲ့အခါ တို့ကိုလည်း မေ့မသွားနဲ့အုံး….။
chaos on January 19, 2008 at 4:54 am said:
ဟက်ပီး ဟက်ပီး ဟက်ပီး ဘတ်ဒေးပါနော်
Ellay on January 19, 2008 at 5:21 am said:
The Brightness Days…Successful Life…Lovely Friedns…Will be filled and surrounded you…
Your Dreams and Wish may come true on this special day and throughout your Life.
Demo on January 19, 2008 at 5:54 am said:
MELODYMAUNG on January 19, 2008 at 8:55 am said:
ဟတ်ပီးဘတ်ဒေး စစ် ဘလော့ဂ်မှာကော်ကော်လာသောက်သွားတယ် ဒါနဲ့တော့ မရဘူး မသောက်ရရင် မနေနိုင်လို့ ညနေကြရင်တော့ လာထား ငှက်ငှက်ငှက်
Layma on January 19, 2008 at 9:07 am said:
happy birthday ပါ ညီမလေး..အစာရှာထွက်လာရင်း မုန့်တွေနဲ့ တည့်တည့်တိုးလို့ဝါးးတယ်…။ ဒေါ်လာတွေ၇ပြီး တက်ချင်တဲ့ဟာတွေ တက်နိုင်ပါစေကွယ်..။
မျှားပြာ on January 19, 2008 at 10:34 am said:
မေါးနေ့မှသည် နောင်နှစ်များစွာတိုင် ငြိမ်းချမ်း အောင်မြင်
ပျော်ရွှင် အဆင်ပြေပါစေ။ အစ်မပင့်ဂိုးရေ ဘဲချောချောလေးနဲ့
လည်း တွေ့ပါစေ ဟတ်ဟတ် ။။။
pandora on January 19, 2008 at 11:19 am said:
ပန်းရောင်ချစ်တဲ့ ပင့်ဂိုးလ်လေးရဲ့ မွေးနေ့မှာ
စိတ်ချမ်းသာမှုအပေါင်းနဲ့ ပြည့်ပြီး လိုရာခရီးကို အရောက်လှမ်းနိုင်ပါစေ။
ပြောပြလို့ မရတဲ့ အရေးတွေလည်း မြန်မြန် ပြောပြနိုင်ပါစေ။ ဟဲဟဲ။
ဂျေဂျေ on January 19, 2008 at 4:46 pm said:
ဟတ်ပီးဘတ်ဒေး ညီမလေးရေ မွေးနေ့ မှာ ဟက်ပီး ၀ဲတီး ဟဲတီး လပ်ကီးဖြစ်ပါစေလို့ 
ံHappy, Wealthy, Healthy, lucky birthday to you.. အာဘွား လက်ဆောင်ပေးလိုက်ပြီ
ခင်မင်းဇော် on January 19, 2008 at 5:43 pm said:
မွေးနေ့နှစ်တရာ တိုင် ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပါစေ..
တစ်ပြည်သူ အိမ့်ချမ်းမြေ့ on January 19, 2008 at 8:52 pm said:
Happy Birthday Pinkgold yaye..
(malayy is not at home.. MMfont ma shi lo bar)
Pinkgold on January 20, 2008 at 7:29 am said:
မွေးနေ့မှာ လာရောက် ဆုတောင်းပေးကြတဲ့ သူတွေ အကုန်လုံးကို အရမ်းကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ပင့်ဂိုလ်း အနေနဲ့ blogger မောင်နှမတွေ အကုန်လုံးနဲ့ မွေးနေ့ ကျင်းပ ချင်ပါသေးတယ်။ အဲလို ဖြစ်နိုင်ပါစေလို့လည်း ဆုတောင်းနေပါတယ်ရှင်။ အားလုံးပေးတဲ့ ဆုနဲ့လည်း တစ်လုံး တစ်ဝကြီး ပြည့်ချင်ပါသေးတယ်ရှင်
Myo Kyaw Htun on January 22, 2008 at 3:00 am said:
Happy Birthday ပါဗျို့ !!!